ဂေါက်ကွင်းထဲ မတော်ရာဝင်လုပ်တဲ့ မြေခွေး အပါအဝင် ၂၀၁၇ ရယ်စရာ တိရိစ္ဆာန်များဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှ ဆုရလက်ရာများ - BBC News မြန်မာ
ဂေါက်ကွင်းထဲ မတော်ရာဝင်လုပ်တဲ့ မြေခွေး အပါအဝင် ၂၀၁၇ ရယ်စရာ တိရိစ္ဆာန်များဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှ ဆုရလက်ရာများ
သစ်ကိုင်းပေါ်က ခြေချော်ကျလို့ ပြန်ကုပ်တက်နေရတဲ့ ဇီးကွက်ကလေးတစ်ကောင်ရဲ့ ပုံဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ရယ်စရာတိရိစ္ဆာန်များ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲရဲ့ ပထမဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲလုပ်ခဲ့တာ အခုဆို သုံးနှစ်ရှိပါပြီ။ ရယ်မောစရာ အပြုအမူလေးတွေလုပ်သွားတတ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ကြည့်ရင်း လူသားတွေနဲ့ အတူ သဘာဝလောကထဲမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘဝတွေကို သတိပြုမိအောင်လို့ စီစဉ်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံပေါင်း ၃၅၀၀ ထဲက ဆုရတဲ့ ပုံတွေကို ရွေးခဲ့ကြတာပါ။ ချစ်စရာ ရယ်မောစရာ အကောင်းဆုံး ပုံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Tibor Kercz / Barcroft Images
Image caption ပထမဆုရသွားတဲ့ ဓာတ်ပုံကတော့ သစ်ကိုင်းပေါ်က ခြေချော်ကျလို့ ပြန်ကုပ်တက်နေရတဲ့ ဇီးကွက်လေး တစ်ကောင်ရဲ့ ပုံပါ။ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့သူက ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသား Tibor Kercz ပါ။ သူရတဲ့ ဆုအထဲမှာ ကင်ညာနိုင်ငံကို ခရီးသွားခွင့် လည်းပါပါတယ်။ Photo: Tibor Kercz.
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Andrea Zampatti / Barcroft Images
Image caption ဘဝဟာ သာသာယာယာပါပဲ။ ဓာတ်ပုံဆရာ Andrea Zampatti အီတလီမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပန်းခြုံပေါ်က ရယ်နေတဲ့ ကြွက်ကလေးပုံက ကုန်းနေသတ္တဝါများကဏ္ဍမှာ ဆုရခဲ့ပါတယ်။ Photo: Andrea Zampatti.
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Troy Mayne / Bancroft images
Image caption ကပ်မလိုက်နဲ့ ပွင့်သွားမယ်၊ လိပ်အနားကပ်မိလို့ မျက်နှာ ဖြတ်အရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ငါးကြီးရဲ့ ပုံကတော့ ရေအောက်သတ္တဝါများကဏ္ဍမှာ ပထမဆုရတဲ့ ဓာတ်ပုံပါ။ Troy Mayne ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ Photo: Troy Mayne.
Image caption John Threlfall ရဲ့ ဒီပုံက လေထဲက တိရိစ္ဆာန်များကဏ္ဍမှာ ပထမဆုရခဲ့ပါတယ်။ ငှက်တစ်ကောင်က မီးခိုးတန်းထုတ်နေသလို မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ တကယ်တန်းကတော့ သူ့နောက်တည့်တည့်မှာ လေယာဉ်ပျံတစ်စီး ဖြတ်ပျံသန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Photo: John Threlfall.
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Daisy Gilardini
Image caption သားသားကိုလည်း ချန်မထားနဲ့၊ ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံပေါက်လေးတစ်ကောင်က သူ့အမေအပေါ် ခုန်တက်မှီတွယ်လိုက်ပါသွားတဲ့ ပုံကို Daisy Gilardini က ကနေဒါနိုင်ငံ Manitoba မှာ ရိုက်ယူခဲ့တာပါ။ Photo: Daisy Gilardini.
Image caption ရေမှာ အနေကြာတော့လဲ ညောင်းသဗျာ။ ဒီ အညောင်းဆန့်နေတဲ့ ဖျံကလေးပုံကိုတော့ Penny Palmer က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား မှာ ရိုက်ယူခဲ့တာပါ။ Photo: Penny Palmer.
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Photo: Carl Henry
Image caption ကဲ လာကြ၊ ဘုရားရှိခိုးကြမယ်။ တောင်အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက တောင်ဂျော်ဂျီယာ ကျွန်းပေါ်က ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုအနား ရောက်လာတဲ့ ပင်ဂွင်မိသားစုပုံကိုတော့ Carl Henry ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ Photo: Carl Henry.
Image caption စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း၊ ဘယ်လဂျီယမ်နိုင်ငံ မြက်ခင်းပြင်တစ်ခုမှာ မြက်တွေကို ပါးစပ်အပြည့် ကိုက်ဆွဲဝါးမျိုဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ယုန်တစ်ကောင်ရဲ့ ပုံကိုတော့ Olivier Colle ကရိုက်ယူခဲ့တာပါ။ ဒိုင်တွေက ဒီပုံကို အထူးဆုပေးခဲ့ပါတယ်။ Photo: Olivier Colle.
Image caption ကဲ တက်တက်၊ ထွက်မယ်။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ပြီး ခရီးနှင်တော့မယ့်ပုံနဲ့ မျောက်နှစ်ကောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုတော့ Katy Laveck-Foster က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူလာဝေဆီ ကျွန်းပေါ်မှာ ရိုက်ယူခဲ့တာပါ။ Photo: Katy Laveck-Foster.
Image caption မင်းတို့ အားလုံး အပေါ်က ငါ၊ ကင်ညာနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မာရာလွင်ပြင်ထဲက တောကျွဲအုပ်ထဲမှာ တခြားအကောင်တွေရဲ့ ကျောပေါ်တက်နေတဲ့ အကောင်ရဲ့ ပုံကို Jean-Jacques Alcalay က ရိုက်ယူခဲ့တာပါ။ Photo: Jean-Jacques Alcalay.
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Photo: George Cathcart
Image caption ဒီအကောင် ဘာလုပ်နေပါလိမ့်၊ အံ့အားတသင့် မျက်နှာပေးနဲ့ ဖျံတစ်ကောင်ရဲ့ ပုံကိုတော့ ဓာတ်ပုံဆရာ George Cathcart က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဆီမီယွန်ကမ်းခြေမှာ ရိုက်ယူခဲ့တာပါ။ Photo: George Cathcart.
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Photo: Douglas Croft
Image caption ကဲ ငါ့ကိစ္စပြီးအောင် လုပ်မှပဲ၊ ဂေါက်ကွင်းထဲက ကျင်းထဲမှာ မစင်လာစွန့်နေတဲ့ မြေခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ ပုံကို ရိုက်ယူခဲ့သူက ဒေါက်ဂလပ် ကရော့ဖ်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဟိုဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Photo: Daniel Trim
Image caption သီချင်းသံပြိုင်ဆိုကြမယ်။ ရွှံ့ထဲမှာ အပြိုင်ကြဲနေကြတဲ့ ဖားနှစ်ကောင်ကတော့ ထိုင်း ကပါ။ Daniel Trim ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံဖြစ်ပါတယ်။